Imizi emi-5 enemibala eminingi emhlabeni | Izindaba Zokuhamba
Imizi emi-5 enemibala eminingi emhlabeni
USusana Garcia | | Amadolobha, General, travel
Ukhathele izindawo ezimpunga nezingenambala namadolobha? Lapho isimo sezulu esihle sifika sithanda ukubona izigcawu ezigcwele umbala, ezinenjabulo enkulu nokukhanya, ngakho-ke uzothanda amadolobha amahlanu agqamile kakhulu emhlabeni. Baningi abanye, mhlawumbe, kepha namhlanje sizogxila kulokhu, lapho bebefuna ukuthi izindlu zibe nemibala egqamile.
Sithanda ukuthola izindawo zoqobo lapho usohambweni, futhi ngaphandle kokungabaza izithombe ezingathathwa kula madolobha amahle zizoba muhle. Izindlu ezigcwele umbala, ezinombala ofanayo noma ezinemibala ehlukahlukene, ezikhethwe ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, kepha ezibe uphawu lwedolobha ngalinye kulawa.
1 Isiqhingi saseBurano eVenice
2 Indawo yaseLa Boca eBuenos Aires
3 Jodhpur eNdiya
4 UManarola e-Italy
5 I-Wroclaw ePoland
Isiqhingi saseBurano eVenice
Isiqhingi saseBurano sisenyakatho neVenice, futhi saziwa ngemisebenzi yezandla enentambo yezintambo. Njengoba isiQhingi saseMurano sidume ngamakristalu aso, abantu abaningi baya eBurano bayothenga intambo futhi babone izindlu ezinemibala edumile, ezenza ibukeke njengendawo yefantasy. Isikhala esigcwele umbala neziteshi lapho kulindwe khona izikebhe ezincane. Uma kunendawo yokuphupha elahlekile, yilesi siqhingi, lapho konke kubonakala kuthathwe komunye umhlaba. Kuthiwa lezi zindlu manje eziheha izivakashi bezipendwe kanjena ukuze amatilosi akwazi ukufinyelela emzini wawo noma inkungu ishubile. Noma ngabe kuyiqiniso noma cha, lezi zindlu ezinhle zingesinye sezizathu zokuvakashela iVenice.
Indawo yaseLa Boca eBuenos Aires
Umakhelwane weLa Boca ungenye yezindawo ezidume kakhulu eBuenos Aires, futhi ngasikhathi sinye ungomunye wabampofu kakhulu edolobheni, nabanye abantu abaziqhenya kakhulu ngale ndawo enhle. Itholakala osebeni lweRiachuelo, futhi ikhule njengendawo yabadobi, ngokwemvelo. Yakhiwa njengendawo okuhlala kuyo abantu bokufika abaningi, ikakhulukazi abadabuka e-Italy, abakha izindlu, abazibiza ngokuthi ama-conventillos, futhi ezazipendwe nge imidwebo eshiywe kumasifundisane. Le yindlela esibona ngayo izindlu ezimibalabala nezinenjabulo kule ndawo. Indawo yayo edume kakhulu yiCalle Caminito, lapho ungabona khona abaculi bekhombisa imisebenzi yabo, futhi okungenye yezinakekelwa kakhulu. Le ndawo kufanele ivakashelwe emini, ngoba ebusuku ayinconywa, noma lapho kunomdlalo eBoca Stadium, ngoba kwesinye isikhathi kuba khona ukungqubuzana.
IJodhpur yaziwa njenge idolobha elihlaza okwesibhakabhaka lombuso wase rajasthan, eNdiya. Uma sikhuluma ngalo muzi oluhlaza okwesibhakabhaka sibhekisa engxenyeni yakudala yalo muzi, ngoba ingxenye entsha ayihlangene ngalutho nayo. Iningi lezivakashi liyathanda ukuvakashela indawo endala, enezindlu zayo ezipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye nezindlela ezingapheli. Le ndawo endala izungezwe udonga olucishe lwadilika.
Inganekwane yezindlu ezipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukuthi amaBrahmins, abesigaba esiphakeme kakhulu, aqala ukupenda izindlu zawo kanjena ukuze azihlukanise nabanye. Akufanele ikhohlakale ukuthi eNdiya kukhona uhlelo lwezenhlalo oluqhubekayo nanamuhla. Ngokuhamba kwesikhathi, izindlu eziningi bezipendwa ngoba leli thoni lixosha izinambuzane futhi libuye libe nombala owamukelekile. Kodwa-ke, ukuthatha izithombe ezinhle kufanele ube nekhamera esezingeni eliphezulu, ngoba imigwaqo, njengoba imincane kakhulu, imnyama. Kuhle ukulahleka kuzo futhi ubone impilo yabantu bayo, izinkomo ezitaladini kanye nezingcweti zenza imisebenzi yazo.
Idolobhana lokudoba laseManarola lisenyakatho ne-Italy, e- ILigurian Riviera, kwamanye amawa abheke olwandle. Ingelinye lalawo madolobha amahle esike sawabona kanye ezithombeni zokuvakasha. Leli dolobha liseCinque Terre, okungamadolobha amahlanu asogwini endaweni yaseLiguria. Kuwo okufanele sikubone yidolobha uqobo lwalo, elihamba emigwaqweni yalo enyukela egqumeni. Umgwaqo omkhulu yi-'Via di Mezzo 'noma umgwaqo ophakathi, lapho ungathola khona izindawo zokudlela nezitolo zobuciko ezithengisa izinto ezithokozisayo. Idolobha lonke linezindlu ezimibalabala kumathoni we-pastel enza iManarola idolobha elihluke kakhulu.
Leli ngelinye lamadolobha amadala futhi amahle kunawo wonke ePoland, agcina ubuhle bawo bangenkathi ephakathi nezakhiwo ezijwayelekile. Enye yezindawo ezinemibala egqamile edolobheni, ngoba asikwazi ukuthola lokhu kungqubuzana kwamathoni ezindlini yonke indawo, yi IRynek Square noma iMarket Square. Kuyo singathola izindlu zesitayela se-Renaissance ezinemibala egqamile, futhi futhi iyisikhungo sedolobha lasendulo, okuyenza ibe yindawo ethakazelisa kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Imizi emi-5 enemibala eminingi emhlabeni
Amapaki amanzi amahle kakhulu e-USA